क्रिकेट इतिहासका यी हुन् चर्चित तीन फिक्सिङ प्रकरण ! » Onlycricnepal
क्रिकेट इतिहासका यी हुन् चर्चित तीन फिक्सिङ प्रकरण !
२५ मंसिर २०७७, बिहीबार १०:४१
काठमाडौं: यी हुन् क्रिकेट इतिहासमा सर्वाधिक चर्चित तीन फिक्सिङ प्रकरण :
हेन्सी क्रोनिया प्रकरण : विश्व क्रिकेटमा सबैभन्दा ठूलो फिक्सिङ काण्ड २००० मा भएको थियो । भारत र दक्षिण अफ्रिकाबीच सो म्याच फिक्सिङ काण्ड भएको थियो । भारत र दक्षिण अफ्रिकाबीचको सिरिजमा भएको उक्ता फिक्सिङमा पाँच खेलाडी संलग्न भएको पाइएको थियो ।
पाँच खेलाडीमा दक्षिण अफ्रिकाका कप्तान हेन्सी क्रोनिए र भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पनि थिए । फिक्सिङमा दक्षिण अफ्रिकाका कप्तान क्रोनिएसहित निकील बोजे र हर्शेल गिब्स पनि सामेल भएको पाइएको थियो ।
भारतको तर्फबाट फिक्सिङमा कप्तान अजहरुद्दीनसहित अजय जडेजाको नाम पनि समावेश थियो ।
आईपीएल स्पट फिक्सिङ: २०१३ को सिजनमा स्पट फिक्सिङको खुलासा भएको थियो । राजस्थान रोयल्सको टिमका तीन खेलाडी फिक्सिङमा सामेल भएका थिए । यो फिक्सिङमा तीव्र गतिका बलर एस. श्रीसंन्थ, अंकित चव्हाण र अजीत चन्दिला सामेल भएको पाइएको थियो ।
साथै, त्यो बेला मुम्बई पुलिसले विन्दुदारा सिंह र गुरुनाथ मयप्पनलाई पनि सट्टेबाजी र बुकीसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै पक्राउ गरिएको थियो। फिक्सिङमा सामेल भएको भन्दै राजस्थानले आफ्ना ती तीन खेलाडीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गरेको थियो ।
दिल्ली पुलिसकाअनुसार श्रीसंन्थ र चव्हाणले स्पटल फिक्सिङमा सामेल भएको स्वीकार गरेका थिए । फिक्सिङमा सामेल भएको पाइएपछि भारतीय कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)ले श्रीसंन्थ र चव्हाणमाथि क्रिकेट खेल्न आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
यद्यपि अदालतले पछि श्रीसंन्थमाथिको आजीवन प्रतिबन्ध हटाएर सात वर्ष मात्र कायम गर्यो । जसकारण उनीमाथिको प्रतिबन्ध गएको सेप्टेम्बरमा हटेको छ । श्रीसंन्थ मैदानमा फर्किने तयारी गरिरहेका छन् ।
३७ वर्षीय श्रीसन्थले भारतका लागि ५३ वानडे, २७ टेष्ट र १० टी-२० खेलेका छन् । उनले किंग्स इलावेन पञ्जाब, राजस्थान रोयल्सलगायतबाट आईपीएल खेलिसकेका छन् ।
इंग्ल्याण्डमा स्पट फिक्सिङ: हेन्सी क्रोनिए फिक्सिङपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा २०१० मा अर्को ठूलो फिक्सिङको घटना बाहिर आयो । त्यससमय पाकिस्तान इंग्ल्याण्ड भ्रमणमा थियो ।
सो फिक्सिङ घटनामा पाकिस्तानका तीन खेलाडी सामेल भएको पाइएको थियो । फिक्सिङमा सामेल हुनेमा तीव्र गतिका बलर मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ र ब्याट्सम्यान सलमान बट्ट थिए ।
फिक्सिङमा सामेल भएको पाइएपछि यी तीन खेलाडीमाथि आईसीसीले ५ फेब्रुअरी २०११ म प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
बट्टमाथि १० वर्ष, आसिफ र आमिरमाथि ५/५ वर्षको प्रतिबन्ध लागेको थियो । प्रतिबन्धपछि २०१५ देखि फेरि आमिर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा फर्किएका छन् ।
वानडे सिरिजः भारतलाई ब्याटिङको मौका, तीन खेलाडीको डेब्यू
२२ माघ २०७६, बुधबार ०१:५३
यी ३ ‘सफल कप्तान’, जसले जित्न सकेनन् आईसीसी टुर्नामेन्ट!
न्यूजिल्याण्डविरुद्ध भारतको खराब सुरुवात, सस्तैमा गुमायो ३ विकेट
२५ माघ २०७६, शनिबार ०७:०९
स्टोक्सलाई पितृ शोक, बुवा जेड स्टोक्सको निधन
२३ मंसिर २०७७, मंगलवार २१:२५